Nguwuphi Umyalelo omele ufunde Iimveli zeHoratio Hornblower?
Ukhetho lwexesha lexesha okanye indalo
Beka ngokuyinhloko ngexesha leMpi yaseNapoleonic , iincwadi ze-CS Forester's Hornblower zibhalela iimbasa zegosa laseBrithani njengoko lilwa nelotshaba, lijongene nobomi, kwaye liphakama kwiinqanaba. Nangona iincintisana ezintsha, ngokukhethekileyo uPatrick O'Brien, uAubrey noMaturin, ziye zanciphisa iHoratio Hornblower ekulawuleni uhlobo lwamabala olwandle, uhlala esithandwa ngabaninzi, kwaye iindibano zethelevishini ezithandwayo zikhangele abantu abaninzi ababenokukwazi ukujonga imfazwe yezemfazwe ngokucacileyo ngakumbi.
Ngaphandle kokuba ungenakunqwenela ukuba ukhonjwe ngenye indawo ngencwadi enye nje, abatsha ukuya kwi-Hornblower bajongene nesigqibo esinqununu: ukufunda iincwadi kwi-Forester yabhala, okanye ngohlobo lwexesha labo langaphakathi. Ngokomzekelo, iRew Return Return yazisa umhlaba kwi-Hornblower, kodwa uluhlu lunamanye amahlanu eencwadi kunye neziganeko ezidlulileyo kwi -Happy Return .
Akukho mpendulo efanelekileyo apha. Funda iincwadi ngokulandelelana kwexesha kwaye ulandele i-Hornblower ngokusebenzisa umsebenzi wakhe kunye nokuphuhliswa kweMpi yamaNapoleon. Ngokwahlukileyo, ukufunda iincwadi ngokulandelwa kwendalo ye-Forester kuvumela isingeniso esilula ( I-Return Return iyakwamkela ngamabomu abafundi abatshatayo) kunye nethuba lokukhumbula ukungqubuzana, njengokuba i-Forester ngezinye iinkqubo yatshintsha ingqondo yakhe okanye yenza iimpazamo kunye nokucinga ecacileyo ngakumbi ekufundeni kwexesha. Isigqibo siya kwahluka kuye kuxhomekeke kumfundi ngamnye
Zomibini iilaydi zilandelayo: (izihloko kwiibhanki zizihloko ze-US):
Umyalelo weNdalo (Indlela eyayiQala kunye neNgcono kakhulu yokufunda)
Ukubuya Okuvuyisayo (Ukubetha kwiiQarter)
Umkhumbi woMgca (uMkhumbi woLwandle)
I-Commodore (iCommodore Hornblower)
Mnu Midshipman Hornblower
Hornblower kunye neAtropos
I-Hornblower kwi-West Indies (i-Admiral Hornblower e-West Indies)
Hornblower kunye ne-Hotspur
I-Hornblower kunye neCrisis-engapheliyo (i-Hornblower kwiCrisis)
Isikhokelo seKronological ('I-Historical' kodwa inzima)
I-Hornblower kunye neCrisis-engapheliyo (i-Hornblower Ngexesha leNkqubela)
* Uninzi lweeveli zale ncwadana engapheliyo ziquka amabali amabini ambalwa, elinye lisetyenziswe xa iqhawe liMidshipman kwaye lifundwa emva kukaMnu Midshipman Hornblower , ngelixa lesi sibini sisetyenziswe ngo-1848 kwaye sifanele sifunde okokugqibela.
Unokwenzela ukuhambisa umceli we-TV kwaye ubukele ukuba kwimeko eye yaveliswa kodwa iquka iziganeko ezivela kwiincwadi ezintathu, kunye kunye zenza utshintsho (kungekhona kumntu wonke).
Iincwadi zeBernard Cornwell malunga ne-Adventures yaseBritish Soldier uRichard Sharpe
Umbono woNyango ku-Islam
Iingcaphuno Zokunceda Ukunciphisa Intlungu Yakho